Gambling Addiction – เว็บคาสิโน dg casino
5 เหตุผลในการเข้าเรียนที่ศูนย์การแพทย์ภายในปี 2564
เมื่อมองแวบแรกการเข้าร่วมศูนย์การแพทย์อาจดูเหมือนไม่มีเหตุผลหรือมุ่งมั่นมากเกินไปดังนั้นคุณอาจต้องการการรักษาประเภทอื่นเช่น Gamblers Anonymous หรือคำแนะนำจากภายนอก แม้ว่าการเข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนเช่น Gamblers Anonymous จะเป็นประโยชน์ แต่อัตราความสำเร็จผ่าน GA นั้นต่ำมากที่ 5% ศูนย์การแพทย์ที่อยู่อาศัยนำเสนอประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครซึ่งช่วยให้ผู้คนสามารถดำน้ำลึกลงไปในกระบวนการฟื้นฟูโดยมีอัตราความสำเร็จสูงขึ้นประมาณ 67% 1. สังคมและความสัมพันธ์นับตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดความโดดเดี่ยวและความเหงากลายเป็นปัญหาสำคัญสำหรับผู้คนนับล้าน สิ่งนี้อาจเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เสพติดการเสพติดเนื่องจากความโดดเดี่ยวสามารถเพิ่มอารมณ์เชิงลบที่ทำให้บุคคลนั้นมองไปที่การเสพติดของตนต่อไป เมื่อคุณอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการฟื้นตัวเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องหากลุ่มคนที่คุณสามารถติดต่อได้ มีการกล่าวกันว่า "สิ่งที่ตรงกันข้ามกับการเสพติดคือการสื่อสาร" เมื่อเราไม่มีความสัมพันธ์ที่มีความหมายในชีวิตเรามักจะมองหาสิ่งอื่นมาเติมเต็มเสมอ การเข้าร่วมศูนย์การพนันที่อยู่อาศัยช่วยให้คุณมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ตลอดชีวิตกับคนที่มีใจเดียวกัน คุณอาจรู้สึกเหงากับการติดการพนัน แต่มีหลายคนที่คล้ายกับการดิ้นรนของคุณ คุณจะไม่เพียง แต่มีเวลาเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น แต่คุณยังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการแบ่งปันประสบการณ์ของคุณเอง นี่เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยในการแบ่งปันการต่อสู้ของคุณโดยไม่ต้องทดลองและคุณจะรู้สึกสบายใจเพราะมีคนรู้ว่าคุณกำลังเผชิญกับอะไร คุณก็จะได้รับการสนับสนุนจากพนักงานและเพื่อนบ้านของเราเช่นกัน เรามีพนักงานชายและหญิงที่มีประสบการณ์ซึ่งหลายคนหายจากการพนันดังนั้นพวกเขาจึงเห็นใจกับประสบการณ์ของคุณและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีเอาชนะความเจ็บป่วยของคุณ 2. กิจวัตรใหม่เมื่อคุณเข้าร่วมศูนย์การพนันส่วนตัวคุณจะเริ่มต้นการเดินทางของคุณเองเพื่อฟื้นฟู การได้รับอากาศบริสุทธิ์ห่างจากความเครียดในชีวิตประจำวันห่างจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือสถานที่ที่การพนันเตือนคุณสามารถให้รางวัลได้มาก คุณมีเวลาจดจ่อกับตัวเองห่างจากสิ่งรบกวน การมีนิสัยใหม่อย่างสมบูรณ์สามารถช่วยให้คุณมีมุมมองใหม่เกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณและทำให้คุณมีหนทางที่จะก้าวต่อไปในชีวิต 3. การรักษาต่างๆที่ Algamus เราต้องการช่วยให้คุณเข้าใจพื้นฐานของการพนันและช่วยคุณค้นหาแผนการรักษาที่เหมาะสมสำหรับคุณ สำหรับบางคนอาจพบว่าการบำบัดแบบกลุ่มมีผลมากที่สุดสำหรับบางคนอาจเป็นโยคะหรือบำบัดเชิงนิเวศหรือหัวข้อการให้คำปรึกษา ทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและไม่ใช่ทุกคนที่จะตอบสนองต่อการรักษาแบบเดียวกัน 4. การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องก่อนที่ผู้อยู่อาศัยจะออกจาก Algamus เราได้พัฒนาแผนการดูแลติดตามผลที่ตรงกับความต้องการของพวกเขา ซึ่งอาจรวมถึงพวกเขาในการให้คำปรึกษาและ / หรือ Gamblers Anonymous และอาจรวมถึงการเกี่ยวข้องกับสมาชิกในครอบครัวในกระบวนการกู้คืน นอกจากนี้เรายังตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราติดต่อกับลูกค้าของเราและให้การสนับสนุนและการสื่อสารอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดตารางการโทรกับพวกเขาในสุดสัปดาห์แรกเดือนสามเดือนหกเดือนและหนึ่งปี 5. COVID-Safe Environment Algamus ยังคงทำงานต่อไปโดยมีบัญชี COVID เพื่อรับรองความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและพนักงานของเรา เราปฏิบัติตามแนวทาง CDC ที่เกี่ยวข้องกับ COVID ทั้งหมดและผู้อยู่อาศัยทุกคนจะต้องทำการทดสอบ COVID เมื่อมาถึง หากพวกเขาได้รับการทดสอบในเชิงบวกพวกเขาจะต้องไปขุดที่ร้านค้าที่กำหนดซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของเรา ท้ายที่สุดแล้วเราเชื่อว่าการติดการพนันควรได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังในฐานะโรคร้ายแรงเช่นกันและการรักษาของคุณไม่ควรหยุดลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เมื่อพูดถึงปัญหาทางการเงินเราจะได้รับการประกันจากผู้ให้บริการประกันภัยเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่ คุณไม่ต้องรอจนกว่าจะถึงด้านล่างก่อนถึงศูนย์บำบัด หากคุณหรือคนที่คุณรักกำลังดิ้นรนกับการพนันเราขอแนะนำให้คุณมาและเราสามารถช่วยคุณหาแผนการรักษาที่เหมาะสมสำหรับคุณได้
ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของการพนัน (การพนันที่ไม่ถูกต้อง / การพนันด้วยอารมณ์ / การพนันทางพยาธิวิทยา / การติดการพนัน) นอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่ว่ามีชื่อมากเกินไป - คือการขาดความเข้าใจว่าบุคคลอาจกลายเป็นผู้ติดศีลธรรมได้อย่างไรในตอนแรก สถานที่. เนื่องจากไม่มียาเสพติดเช่นแอลกอฮอล์หรือนิโคตินรวมอยู่ด้วยคนส่วนใหญ่เชื่อว่าการหยุดการพนันน่าจะง่ายพอ ๆ กับการขับรถไปที่ร้านพนันหรือการลบแอปการพนันในโทรศัพท์ของคุณ จริงๆแล้วมันยากและหนักกว่านั้น ดังนั้นฉันจึงใช้เหตุผลบางประการที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากติดการพนันเพื่อที่จะกำจัดและทำให้สิ่งต่างๆง่ายขึ้น , โดปามีนในสมอง. มันเกิดขึ้นในเส้นทางแห่งรางวัลในสมอง - พื้นที่ที่ทำให้เรามีเป้าหมายในการให้รางวัลแก่เราเมื่อเรากินอาหารบางอย่างหรือมีเซ็กส์ (กิจกรรมที่เชื่อมโยงอย่างมากกับการอยู่รอดของแต่ละบุคคลและสายพันธุ์) การพนันเช่นเดียวกับยาเสพติดหลายชนิดสามารถ 'แย่งชิง' เส้นทางแห่งรางวัล - เพื่อให้เราสามารถ 'รู้สึก' ได้ว่าเราต้องเล่นการพนัน (หรือสูบบุหรี่ดื่มใช้โคเคน) เพื่อความอยู่รอด เช่นเดียวกับแอลกอฮอล์และยาเสพติดอื่น ๆ เราพัฒนา 'ความอดทน' ต่อการพนันเมื่อเวลาผ่านไปและมีอาการ 'ถอนตัว' เมื่อเราละเว้น ความอดทนและการถอนตัวเป็นองค์ประกอบหลักของการเสพติด ข่าวดีก็คือเคมีในสมองจะกลับสู่ระดับปกติของการผลิตโดปามีนหลังจากที่งดการพนันและอาการถอนตัว สิ่งเหล่านี้มักรวมถึง: อารมณ์ต่ำ, วิตกกังวล, หงุดหงิด, นอนหลับยาก, วิตกกังวล การพนันนำไปสู่ ​​"การปรับสภาพพฤติกรรม" เช่นเดียวกับที่เราสามารถดูโทรศัพท์มือถือระดับไฮเอนด์เพื่ออัปเดตโซเชียลมีเดียข้อความและอีเมลเรายังสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพกับการพนันได้อีกด้วย การควบคุมพฤติกรรมมีสองประเภท: คลาสสิกและโอเปอแรนท์ กฎปกติบางครั้งเรียกว่า "คำตอบของ Pavlovian" ซึ่งหมายถึงการทดลองพฤติกรรมยอดนิยม "Pavlov’s Dog" โดยทั่วไปการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าการตอบสนองโดยไม่รู้ตัวสามารถ "ผสม" กับสิ่งกระตุ้น (ทริกเกอร์) เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อทริกเกอร์ซ้ำ ผู้ที่ก่อให้เกิดปัญหาการพนันมักจะเริ่มดูกีฬา แต่ไม่เล่นการพนันเพื่อผลการแข่งขัน แต่เมื่อเวลาผ่านไปจะเข้ามาสัมผัสกับอุตสาหกรรมการพนัน พฤติกรรมทั้งสองรวมกัน "เข้าด้วยกัน" ทำให้บุคคลนั้นรู้สึกไม่สบายใจเมื่อไม่ได้เล่นการพนันระหว่างกิจกรรมกีฬา (อาการถอนตัว) ข่าวดีก็คือเช่นเดียวกับสุนัขของพาฟลอฟการแตกหัก (ตาย) เมื่อเวลาผ่านไปและคนส่วนใหญ่สามารถกลับไปดูกีฬาได้โดยไม่ต้องมีแรงกระตุ้นให้เล่นการพนันหรือมีอาการถอนตัวยาก การปรับสภาพของผู้ปฏิบัติการทำงานเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมผ่านการให้รางวัลหรือ "การลงโทษ" สำหรับพฤติกรรมประเภทอื่น ๆ ซึ่งมักจะไม่มีผลตอบแทน ("แครอทและไม้") "แผนภูมิดาว" เช่นเดียวกับที่ใช้ในการศึกษาระดับต้นเป็นคุณลักษณะของการปรับสภาพการปฏิบัติงาน ครูให้รางวัลกับพฤติกรรมที่พวกเขาต้องการให้กำลังใจและเห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่า นักจิตวิทยาพฤติกรรมบีเอฟสกินเนอร์ได้พัฒนาทฤษฎีของการปรับสภาพการทำงานโดยอาศัยการทดลองพฤติกรรมกับสัตว์ ("กล่องสกินเนอร์") เมื่อเขาพยายามกำหนดทฤษฎีของเขาต่อสาธารณชนเขาเปรียบเทียบ Skinner Box กับสล็อตแมชชีน - เพราะมันทำงานบนหลักการเดียวกัน สกินเนอร์พบว่า "โปรแกรมรางวัล" ที่เสพติดมากที่สุดคือ "กำหนดการรายเดือน" นั่นหมายความว่าเราทุกคนถูก จำกัด มากขึ้นในการแสวงหารางวัลเมื่อมันไม่คาดคิดไม่ใช่เมื่อเราคาดหวัง สำหรับคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาการพนันคือความคาดหวังของรางวัลซึ่งให้ความตื่นเต้นกระตุ้นและโดพามีนไม่ใช่รางวัล หากคุณกำลังอ่านข้อความนี้ในฐานะผู้ที่มีปัญหาการพนันคุณอาจไม่สามารถเชื่อมโยงกับมันได้ อย่างไรก็ตามคุณอาจประสบกับกระบวนการเดียวกันบนโซเชียลมีเดีย คุณไม่มีทางเดาได้เลยว่าคุณจะพบบทความที่น่าสนใจหรือให้ความบันเทิงเมื่อใดดังนั้นคุณจึงเปิดอ่านต่อไป คุณไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะมีคนต้องการแสดงความคิดเห็นหรือแชร์ข้อความของคุณจำนวนเท่าใดคุณจึงตรวจสอบต่อไปและรับ Dopamine ในปริมาณเล็กน้อยเมื่อปิดการแจ้งเตือน คนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาการพนันกำลังพยายามที่จะฟื้นตัวจากพฤติกรรมของตนให้ห่างจากการปรับสภาพแบบคลาสสิกและการดำเนินการซึ่งในหลาย ๆ กรณีเกิดขึ้นเป็นเวลาหลายปี - การพัฒนานิสัยจิตใจที่เคยชิน หากคุณเป็นคนรักการอ่านสิ่งนี้และคุณยังคงดิ้นรนเพื่อทำความเข้าใจว่ามันอาจจะรู้สึกอย่างไร - อาจคิดว่าจะอยู่ห่างจากโซเชียลมีเดียสัก 1 สัปดาห์และดูว่าคุณรู้สึกอย่างไร พวกเราส่วนใหญ่มีช่วงเวลาที่ยากลำบากเพราะเราถูกรายล้อมไปด้วย ‘ทริกเกอร์’ ที่เตือนเราว่าถึงเวลาแสวงหารางวัลของโดพามีน 'Hopium': Tony O'Reilly เพื่อนร่วมงานของฉันมักพูดว่า: "ไม่มีใครเชื่อว่าแอลกอฮอล์สามารถแก้ปัญหาโรคพิษสุราเรื้อรังได้ - แต่ทุกคนเชื่อว่าพวกเขาสามารถเสี่ยงโชคเพื่อแก้ปัญหาการพนันได้" คนส่วนใหญ่ที่เคยผ่านบริการให้คำปรึกษาของเราหรือที่เรียกว่าสายด่วนช่วยเหลือของเรามี "ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่" (หรือรางวัลใหญ่หลายครั้ง) สิ่งนี้ทำให้บุคคลนั้นมี "หลักฐาน" ว่าพวกเขาสามารถ "ขุดเส้นทางออกจากหลุม" ที่พวกเขาขุดได้ (โดยใช้พลั่วอันเดียวกัน) น่าเศร้าสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการพนันความหวังนี้เป็นคำว่า ‘Hopium’ ที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นความเชื่อที่ไม่สมจริง ขี้เกียจ. ผู้ที่มีปัญหาการพนันเพียงแค่เล่นการพนันต่อไปแม้จะได้รับชัยชนะครั้งใหญ่เพราะพวกเขาไม่ติดเงิน ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการพนันและเงินช่วยให้คุณสามารถเล่นพนันต่อไป (อยู่ในสถานะ "ดำเนินการ") ได้นานขึ้น หลายคนที่หมดหวังที่จะจ่ายหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการพนันเชื่อว่าการพนันเป็นทางเลือกเดียวสำหรับพวกเขา แน่นอนว่านี่ไม่เป็นความจริง - เพราะหลายคนที่ได้เรียนรู้วิธีที่ยากสามารถพิสูจน์ได้ นอกจากนี้เรายังได้บันทึกส่วนพอดคาสต์ในหัวข้อนี้ซึ่งเราจะพูดคุยกับ Tony O'Reilly และฉันจะพูดคุยในรายละเอียดเพิ่มเติม .
Ny dingana voalohany amin’ny famerenana amin’ny laoniny amin’ny fiankinan-doha amin’ny filokana – Tantaran’i Marka
Lahatsoratra bilaogin'ny mpitsidika avy amin'i Mark. Tianay ny misaotra an'i Marka noho izy nifandray sy nanolotra ny fizarana ny tantarany. Ny lahatsoratra tany am-boalohany dia hita ao amin'ny bilaogin'i Marka: https://marksrec Recovery.blogspot.com/ ** Mariho tsara fa ny GamStop, izay noresahin'i Marka tamin'ity lahatsoratra ity, dia tsy azon'ny mponina UK ihany. GamStop dia tetik'asa fanilihana tsy miankina amin'ny mpandraharaha maro - ny karazana rafitra izay tena ilaina any Irlandy ary tokony ho laharam-pahamehana amin'ilay volavolan-dalàna momba ny filokana, rehefa napetraka ** "Mark no anarako ary izaho dia mpiloka an-tery. Ny filokana farany nataoko dia ny 2 aprily 2019. Ny andro 2 aprily dia fiovana lehibe teo amin'ny fiainako, io no andro farany nanaikako ny sakaizako maharitra, izay renin'ny zanako roa, ary ho an'ny ray aman-dreny fa mpiloka an-terivozona aho ary mila fanampiana. Ny faran'ny herinandro talohan'io dia rehefa niteny tamin'ny tenako aho hoe manana ampy, efa 14 taona ny filokana ary nokapohina mafy dia mafy aho ka sahirana ara-tsaina sy ara-bola. Na dia tsy nisy nahalala an'izany aza satria manam-pahaizana amin'ny manafina azy io aho dia nanomboka niloka toa ny olona rehetra tany Angletera na Irlandy, The Grand National. Ny andro iray amin'ny taona izay toa manana filokana daholo ny vehivavy sy ny zaza . Ny hazakazaka soavaly lehibe indrindra eto an-tany. Izany sy ireo fialantsasatra mahafinaritra nandany tao Port maika ny milalao ny milina 2p. Tsy omeko tsiny iray segondra ireo traikefa ireo noho ny olako filokana, fa ireo no fahatsiarovana ahy voalohany amin'ny filokana. Vantany vao feno 18 taona aho dia nanokatra kaonty niaraka tamin'i Blue Sq ary nanomboka ny diako filokana amin'ny filokana amin'ny Internet. Ny zoma alina dia lany amin'ny filokana amin'ny Wolverhampton avokoa ny hazakaza-tsoavaly amin'ny toetr'andro sy ny fizarana faha-2 amin'ny Holandey sy frantsay. Ny fialamboly tsy misy atahorana, filokana voafehy, tsatoka kely. Mbola niasa tapa-potoana aho tamin'ity dingana ity, nandao ny sekoly tamin'io fahavaratra io ary tsy nanelingelina ny filokana. Raha vantany vao nahazo ny asako manontolo aho na dia niova izany rehetra izany. Ny fotoana voalohany nahafahako nametraka ny rantsan-tànako rehefa niova ny filokana nataoko dia ny andro voalohany tamin'ny vanim-potoanan'ny baolina kitra 2008/2009. Niasa nandritra ny 3 taona teo ho eo aho ary mbola voafehy ihany ny filokana. Niloka aho, saingy tsy niteraka olana tamiko izany. Tamin'io zoma io dia niditra tao amin'ny Paddy Power aho ary nanapa-kevitra fa tsy hametraka kilalao filokana ho an'ny baolina kitra adala ho an'ny £ 1 na £ 2 dia hifantina ekipa telo ho an'ny vanim-potoana ary hanao treble £ 20 isan-kerinandro. Sheffield United, Leicester City ary Leeds United no nifantina. Mazava ho azy, ny faran'ny herinandro voalohany dia niantsona izy (ny fotoana tokana nilatsahany tamin'ny vanim-potoana rehetra eritreretiko) ary niova tamin'izany ny filokana. Tena tsy tadidiko ny zava-tsoa fa tsy maintsy nisondrotra £ 100 aho tamin'io tsatokazo £ 20 io ary taorian'io fiakarana £ 1 na £ 2 io dia tsy nahasarika. Inona no ilaina ao raha afaka mahazo £ 20 aho ary handresy bebe kokoa. Nanomboka tamin'izay fotoana izay dia nanomboka tsy voafehy intsony ny filokana. Avy eo dia tonga ny indram-bola, ny carte de crédit, ny findramam-bola, fantatro teo am-piandohana fa nanana olana aho. Izaho manokana dia nanilika ireo toerana nandritra ny taona maro fa tsy te hiala mihitsy. Nahazo trosa aho nefa afaka nanohy ny fomba fiainako rehefa nipetraka tao an-trano aho. Tadidiko aho indray andro nandeha tany amin'ny toerana fisoratana vola izay ahafahako manoratra fanamarinana £ 100, daty amin'ny karamako manaraka, ary homen'izy ireo £ 90 aho avy eo. Nanao fizahana roa aho ny fivoahana tamin'io faran'ny herinandro io (ary ny filokana roa ao amin'ny Aintree Festival) dia nandeha nizotra nankany amin'ireo bookies ary nahazo ny £ 180 an'i Denman handresy ny Aintree Bowl amin'ny vola aza. Niaritra ny fianjerany voalohany izy. Niverina tany amin'ny toerana fanefana vola aho £ 90 hafa. Nifindra tany an-tranon'ny namako nandritra ny herintaona aho ary nitohy ny filokana, na dia tsy dia manam-bola firy aza aho. Ny naotiko dia nanjary nokapohina saingy tanora aho ary tsy dia niraharaha izany. Avy eo nihaona tamin'ny sipako ankehitriny aho tamin'ny volana feb ary niara-nifindra tamin'io septambra io izahay. Nitohy ny filokana ary miharatsy hatrany. Nanao ny hetsika tamim-pahakingana aho mba hahazo asa faharoa hanampiana ny filokana… ... amin'ny làlan'ny greyhound. Mahazo eo amin'ny £ 20 isan'alina aho nefa miloka £ 60 na £ 80. Hadalana. Nanan-janaka voalohany izahay tamin'ny aprily 2012 ary tsy ela taorian'ny nahitany fa filokana amin'ny vola notehiriziko aho. Tsy vola be izany, saingy sosotra izy (marina izany). Nahavita niresaka ny fomba hialako tamin'io aho ary tamin'izay vao tena nahay nanafina zavatra aho. Noraisiny ny fifehezana ny vola hofan-trano sy ny vola ho an'ny zanakay lahy ka tsy tandindomin-doza velively izany, soa ihany. Nananay ny zanakay vavy tamin'ny 2016 fa mbola nitohy ny filokana. Handalo dingana aho izay hijanonako tanteraka mandritra ny volana maromaro, herintaona amin'ny fotoana iray, saingy averiko foana izany fa mieritreritra aho fa mifehy fa tsy izany mihitsy. Rehefa miloka aho dia mametraka vola £ 10, very, mametra £ 10 hafa, manary azy, sasao ary avereno mandra-pialan'ny volako rehetra. Raha nandresy aho dia midika fotsiny fa afaka miloka intsony aho. Tsy momba ny vola velively izany. Noheveriko fa izany, fa ny tena vola no lasantsy afaka mitazona ahy miloka lava kokoa. Ny ankamaroan'ny volana dia nanamontsana aho andro vitsivitsy taorian'ny karama ary tsy afaka miloka mandra-pahatongan'ny karama manaraka. Tamin'ny faran'ny 2016 dia nahalany £ 2k aho ary niloka tamin'ny baolina rehetra erak'izao tontolo izao. Nifoha ary nanomboka niloka tany Azia, nifindra nanerana an'izao tontolo izao nankany Moyen Orient, Afrika, Eropa ary avy eo natory tamin'ny filalaovana baolina kitra amerikana tatsimo. Tsy voafehy izany. Ny filokana amin'ny baolina kitra ejipsiana amin'ny andro Xmas dia jiro iray manokana.Hiditra amin'ny taona 2018 aho dia tao amin'ny "toerana tsara" niaraka tamin'ny filokana, na nieritreritra aho. Matched Betting aho izay fomba iray ahazoana vola amin'ny alàlan'ny tolo-kevitry ny mpamaky boky. Niasa tsara nandritra ny volana vitsivitsy izy io fa nody mandoto tamin'ny fahavaratry ny taona 2018. Ny Matched Betting dia nampahafantatra ahy ny lafin'ny casino ary very vola 3,5k aho tamin'ny roulette. Tsy hiditra amin'ny fidirana anaty sy ny fomba nahazoako izany karazana vola izany aho, avelao aho hiteny hoe tsy nanao izany ary nahita fomba hametrahana amin'ny alàlan'ny debit mivantana aho ary mazava ho azy fa ireo rehetra ireo. Soa ihany fa nanome valisoa ahy i Paddy Power tamin'ny nanaovany ahy ho mpanjifa VIP taorian'izay. Ka nanenjika fomba goavambe aho ary nahazo bonus £ 50 isan-kerinandro maimaim-poana tamin'izy ireo saingy tsy afaka nahazo vola ampy hampiatoana aho, satria tsy nisy vola ho ampy. Ny tolotra omen'izy ireo vola raha toa ka mandresy ny Horse X dia mazàna £ 10 max max, nahazo 100 £ max aho. Farany dia lany ny fomba hahazoako vola ary rehefa nanomboka tsy niloka tamin'i Paddy Power intsony aho dia nesorin'izy ireo ny satan'ny VIP. Nahazo £ 1000 tamin'ny filokana NFL aho ary very tamin'ny roulette ny herinandro ambony. Fanamarihana ambany iray hafa.2019 afaka nahatsapa ho sahirana aho. Ny fiainako dia lanin'ny filokana na ny fikaroham-bola hahazoana filokana ary avy eo ny fomba hamerenako ny olona trosa amiko. Tany amin'ny toerana ratsy aho, olona ratsy toetra aho, nandainga, tezitra, be sitra-po nefa mbola tsy nisy nahalala ny marina. Avy eo tonga ny faran'ny herinandro talohan'ny 2 aprily. Vao avy nokaramaina aho ary nametraka vola tao amin'ny kaontiko Bet365 ary nahavita nahazo ny lanjako hatramin'ny £ 910 tamin'ny zoma 29 martsa. Tokony holazaiko amin'ity dingana ity fa filokana amin'ny tenisy tanteraka aho. Tsy mpandresy amin'ny lalao, naharitra ela loatra, mpandresy napetraka matetika na mpandresy amin'ny lalao manaraka satria haingana kokoa. Ankehitriny ity £ 910 ity dia ho nanadio ny sasany tamin'ireo trosako maika hamela ahy hanohy hiloka. Ny hany sisa nataoko dia ny nisintona, ary handeha aho… ... raha vantany vao nahatratra £ 1000 aho. Araka ny azonao an-tsaina dia very ny betsaka. 300- £ 400 ao amin'i Benoit Paire no iray tamin'ireo trangana ratsy indrindra saingy niloka toy ny lehilahy adala aho. Tamin'izany no niloka ahy rehefa nahazo fandresena aho, tsy voafehy intsony ny tsatokazo. Tamin'ny fotoana nialako niasa tamin'ny 6 ora hariva tamin'ny zoma dia lasa ny £ 910 manontolo. Nandoka tamin'ny ATP, Challenger, ITF aho, izay tennis teo amboniko dia filokana ao aminy. Raha ny andro dia tadidiko ny filokana amin'ny lalao tenisy izay nananan'izy ireo baolina iray. Mbola tantara izay mitondra tsiky eo amin'ny tavako raha manao ny marina aho. Tamin'io zoma alina io dia nametraka izay sisa tavela tao amiko aho ary nahavita nahazo ampahany kely tamin'ny vola, saingy mbola tsy ampy izany. Mbola tsy io no nananako teo aloha. Ka ny faran'ny herinandro manontolo dia nandeha toy izany, ambony sy ambany, ambony sy ambany. Nandeha nisakafo hariva natokana ho an'ny fianakaviana aho ary nipetraka tamin'ny filokana tamin'ny telefaona tontolo alina. Izany no nahatonga ny fiainako ho taona farany, manatrika fivoriana aho, na amin'ny alina fa ny saiko dia miloka ao anaty telefaoniko ary tsy manome na inona na inona momba an'iza. Farany lany ny vola tamin'io faran'ny herinandro io. Korontana aho. Azoko natao tokoa ny nanao azy ara-bola sy nahavita ny volana fa very ara-tsaina aho. Azoko lazaina fa nametraka ahy nosedive ny ati-dohako ary ny fomba tokana niafaran'izany dia tamin'ny loza. Mety tsy tamin'ity volana ity, na tamin'ity taona ity, fa nidina tany amin'ny vatolampy ambany aho. Nipetraka tamin'ny alatsinainy aho ary nanoratra izay rehetra tokony haloako, izay tokony haloako, teti-bola hirosoana. Tsy dia nisy dikany ny famakiana azy, £ 18k tao anaty loaka. Tsy ny vola no olana, fa ny fihetseham-pony, ny fotoana laniko. Fantatro hoe oviana ary aiza ny fihaonan'ny GA akaiky ahy indrindra ary nanoratra izany koa. Ka nahita baolina maromaro aho ary tamin'ny talata dia nilaza tamin'ny sipako aho. Ny toetrako dia ny fiainana tsy afaka ny ho ratsy kokoa noho ny ankehitriny. Misafotofoto aho, nitomany aho, nanantena tamim-pahatsorana aho fa hilaza amiko izy hivoaka ary tsy hanome tsiny azy aho, saingy nahagaga izy. Mazava ho azy fa tezitra izy fa tena nanohana be. Niantso ny ray aman-dreniko aho avy eo ary nilaza tamin'izy ireo. Diso fanantenana izy ireo, very hevitra nefa tena nanampy ihany koa. Avy eo ny andro manaraka dia nilaza tamin'ireo namako akaiky ahy indrindra aho izay tena nanohana be daholo. Manana vola kely amin'izy ireo koa aho ary nahafinaritra azy ireo ny nanangana drafi-pandoavana handoavana izany. Nisoratra anarana ho an'ny GAMStop aho ary nesoriko manokana tamin'ny Internet nandritra ny 5 taona izay nanalavitra ahy ny lalana filokana amin'ny Internet. Dingana tena ilaina raha ny Internet no mpisolo anao. Nandeha tamin'ny fivorian'ny GA voalohany aho tamin'ny Alarobia 3 aprily. Tsy mety amiko ny fotoana amin'izany, Alatsinainy amin'ny 9 alina no fivoriako saingy nahatsapa aho fa mila mankany amin'ny ASAP iray. Tsy fantatro izay antenaiko ho GA fa io dia iray amin'ireo vondrona mahatalanjona indrindra hitako. Izy io dia toerana fanariam-pako ho an'ny fahalalako rehetra ary toerana ahafahako mihaino ny tantaran'ny olon-kafa. Raha tsy misy firaisana ara-nofo manao firaisana ara-nofo, dia zavatra azon'ny lehilahy betsaka atao ivelan'ny fiankinan-doha, toerana hiresahana ny fiainana sy ny fahatsapan'izy ireo izany. Mandeha an-tongotra 50 kilaometatra aho isaky ny alatsinainy mankany. Rehefa niloka aho raha tsy maintsy nandeha 50 kilaometatra mba hiloka Internet dia afaka manome toky ianao fa nanao dia isan'andro. Rehefa mandao fivoriana iray aho dia mihomehy, noho ny antony marina rehetra. Izaho dia mpamonjy voina raha ny momba ny GA izao ary tsy maninona aho. Efa nadio nandritra ny 10 herinandro aho izao, ary tsy nanana fanentanana mba hiloka. Mahatalanjona ny fiainako, nisy foana izany saingy variana tamin'ny fiankinan-doha loatra aho ka tsy hitako. Manana sipa mahatalanjona sy zanaka roa mahafinaritra aho miaraka amin'ny ray aman-dreniko izay mahafinaritra be tokoa. Ny namako dia tambajotra mpanohana hafa tsy vitako raha tsy eo izao. Izaho koa dia mpikambana ao amin'ny filokana filokana ao amin'ny Reddit ary manao fivoriana isan-kerinandro amin'ny alàlan'ny Skype izy ireo isaky ny alarobia izay lasa ampahany amin'ny fanaoko isan-kerinandro (manampy fanampiny iray hafa koa izy ireo amin'ny talata). miaraka amin'ny fianakaviako. Azo fehezina ny trosa, ny fampiatoana ny filokana dia indray mandeha isan'andro, fa ny tena ifantohan'ny fahasitranako dia ny fanitsiana ny kileman-toetrako, fanampiana ny hafa, fisokafako ary marina amin'ny olona aho fa tsy ho sandoka feno fitiavan-tena. Tsy manana olana amin'ny indostrian'ny filokana na ny olona miloka aho, fantatro fotsiny fa tsy afaka miloka aho satria loza no hiafarany. Mahatsapa aho fa tokony hisy fifanakalozan-kevitra bebe kokoa momba ny filokana ary ny indostria dia tokony hametraka vola bebe kokoa hanampiana ireo mpiloka olana ary hanampy amin'ny famantarana ireo mpiloka olana. Tsara ny tsipika, araka ny fantatro raha nisy bookie nilaza tamiko fa nahatsapa izy ireo fa manana olana ary tsy hanaiky filokana dia tezitra aho ary nandeha tany amin'ny toeran-kafa. Mila vonona ny ho sitrana ianao handray azy tsara. Mbola tsy tamin'ny 2 aprily mihitsy aho. Ho an'ireo olona ao anatin'ny fanarenana dia mila vonona isika hanampy ireo izay tonga amin'ny sehatra izay vonona ny ho sitrana. Izahay no hiankinan'ireto olona ireto rehefa nandalo azy izahay, azonao atao ny miteny rehefa miresaka amin'ny olona iray izay tsy nanana fiankinan-doha amin'ny filokana izay tsy azony fotsiny. Mandritra ny taona ho avy dia mieritreritra aho fa hisy fiakarana lehibe eo amin'ny olona mitady fanampiana amin'ny filokana. Amin'izao fotoana izao anefa, ho ahy, ny filatsahako manaraka dia tsy momba ny vola laniko, ho very ny sakaizako sy ny zanako ary tsy filokana mendrika ahazoana izany. ".